Dbuzz ၏ ပြောင်းလဲလာမှုနှင့် Post တင် မြန်ဆန်လာခြင်း — TrafficInsider
Dbuzz ၏ ပြောင်းလဲလာမှုနှင့် Post တင် မြန်ဆန်လာခြင်း
maungthan in HIVE-MYANMAR • 13 days ago (edited)
အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျ။ ဒီနေ့မှာတော့ Dbuzz အသုံးပြုရင်းပြောင်းလဲလာတာ တစ်ခုကို ​သတိထားမိပါတယ် ။ အဲဒါကတော့ dbuzz ရဲ့ version 3.21.1 မှာ Post တင်ရတာ မြန်ဆန်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကဆို Dbuzz မှာ Post တင်ရင် Photo တင်ရခက်တာ ၊ ကြာနေတက်တာကို အမြဲ ကြုံရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ version အသစ်မှာ Post တင်ရတာ အတော်လေးအဆင်ပြေနေပါတယ်။
ဒီနေ့ ကျွန်တော် Dbuzz ကနေ Post တင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ ဓာတ်ပုံက 11.27 MB ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါက MB အနည်းငယ် များတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ထူးခြားမှုတစ်ခုကို တွေ့ရတာက dbuzz ကနေ အလိုလို Auto Compressing ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာ သိလိုက်တာက dbuzz မှာ ပုံတင်ရတာ အရင်ကထက် အတော်လေး မြန်ဆန်လာတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ညီ အစ်ကို မောင်နှမများ လည်း Dbuzz ကို ပုံမှန်အသုံးပြုသူများပြားသည်မို့ သတိထားမိမည်ထင်ပါသည်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် dbuzz ကို အသုံးပြုရသည်မှာ ပိုမို လွယ်ကူ လျင်မြန်လာသည်မှာ သေချာပါသည်။ ထိုထက်ကောင်းသည်မှာ dbuzz သည် 10 % voting ပေးလျှင် 1$ အထက် ရသည်က အရင်ကထက် ပိုမို ကောင်းမွန်လာပါသည်။ သို့သော် dbuzz တွင် တင်သော Post တိုင်းတော့ voting မရခဲ့ပါ။
#myanmar #proofofbrain #trafficinsider #neoxian #creativecoin #archon #ash #cent
13 days ago in HIVE-MYANMAR by maungthan
ဟုတ်တယ် ပုံတင်တာတွေ အရင်လို Loading fail ဖြစ်တာ မရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီး သုံးလို့ပိုကောင်းလာတယ်။ !PIZZA
@maungthan! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @uthantzin.
maungthan 12 days ago
ဟုတ်တယ်အကို သုံးရတာ အတော်လေး ပေါ့ပါားလာတယ်
Your content has been boosted with Ecency Points, by @maungthan.
myanmarkoko 12 days ago
ပိုစ်တိုင်းတော့ သူလည်း Vote မပေးနိုင်ဘူးလေ။
😅 Voting Power ချိန်ရသေးတာကိုး။
ခုနောက်ပိုင်း ပိုစ်တင်သူများလာတော့ သူတစ်ယောက်တည်းရဲ့ အားနဲ့ မလောက်တော့ဘူးလေ။ !PIZZA
@maungthan! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @myanmarkoko.
အဲဒါလည်းဟုတ်တယ်အကို နောက်ပိုင်း Dbuzz သုံးသူအတော်များလာသလိုပဲ။
ဟုတ်သဗျို့ ခုမှ စမ်းတင်ကြည့်တာ
ယခင်က ပုံတင်ခက်သမို့ မတင်ဖြစ်ဘူး။
@maungthan! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @htwegyi.
@maungthan! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @callmemaungthan.
ဟုတ်သား ကြက်ဆူပင်နဲ့လည်း တူတယ်။ ဟိုတခါ post တင်တုန်းကအပင်က သေးသေးလေးဆိုတော့။ !PIZZA
@maungthan! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @kachinhenry.